လိမ်လည်ခြင်း — Steemkr
အပြစ်မဲ့လူတွေကိုအသုံးပြုသူများမှသာယာဝဆောင်ခဲ့ဦးမည်ကြောင်း "မှော်ကျောက်များ" နှင့် ရောင်းယုံကြည်မှု အားဖြင့်သူတို့ရဲ့ငွေနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုထားပြီဘယ်မှာအများအပြားသာဓကရှိပါတယ်။ ဤအအတုဆောင်းပါးများကိုအဘို့အမတန်တဆခု၏ပေးဆောင်ပြီးနောက် ဝယ်လက်နောက်ဆုံးမှာသူတို့ ၏တန်ဖိုးမရှိအပိုင်းပိုင်းအဘို့အခက်ခဲ-ရရှိခဲ့သည်ပိုက်ဆံပေးဆောင်ပြီဟုနားလည်သဘောပေါက်။
ထို့နောက်ကြီးတွေအချိန်လူလိမ်ရှိပါတယ်။ ဤလူကိုတုပကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရန်ကြီးမားအတုစစ်ဆင်ရေးကို set up ။ branded အဝတ်, လက်ကိုင်အိတ်, ခါးပတ်နှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများနီးကပ်စွာကူးယူနှင့်စစ်မှန်သောဆောင်းပါးများ '' ကုန်ကျစရိတ်၏အစိတ်အပိုင်းမှာထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်မူရင်းအဖြစ်ရောင်းစားနေကြသည်။ တောင်မှသန့်စင်ခန်းသုံးခြင်းနှင့် over-the-counter ဆေးဝါးနှင့် လျက်ရှိသည်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာ, ခိုးကူးကျစ်လစ်သိပ်သည်း discs တွေကိုများ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းတစ်ဦးမြင့်တက်ရှိခဲ့သည်။ CD ကိုရဲ့ပုံစံအားလုံးကိုခိုးကူးလျက်ရှိသည်: အသံ CD ကိုဖွင့်, ဗီဒီယိုကို CD ရဲ့နှင့်ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲ။ CD ကိုပင်လယ်ဓားပြနှစ်ဦးစလုံးဖျော်ဖြေရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းတရားဝင်မူပိုင်ကိုင်ဆောင်သူ၏အမြတ်အစွန်းသို့နက်ရှိုင်းစွာလျှော့ချသောဤလမ်းကြောင်းသစ်မှာအုတ်အုတ်သဲသဲဖြစ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့သောကြီးမားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်လာသည်။
ဒါဟာသမျှသောဤလိမ်လှုပ်ရှားမှုရပ်တန့်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံရသည်။ အဆိုပါအာဏာပိုင်များထိုကဲ့သို့သောအလေ့အထများကိုထိန်းချုပ်ရန်သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်နေကြပေမယ့်လည်းငါတို့ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပြုရပေမည်။ ကျနော်တို့မူရင်းအဖြစ်အတုယူကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချကြောင်းနေမကောင်းဂုဏ်သတင်းကုန်သည်တွေ နှင့်ခိုးကူးကျစ်လစ်သိပ်သည်း discs တွေကို ကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်နဲ့ ပယ်မစောင့်, လောဘသို့မဟုတ်အယူသီးမှုကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်မှု ၏သားကောင်များအောင်ဘယ်တော့မှမသွားပါစေသင့်ပါတယ်။
esteem avoid cheating dirty
Congratulations @tartay! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
Congratulations @tartay! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
Congratulations @tartay! You receivedapersonal award!